Inhlokodolobha Russian linikeza izindawo eziningi nsuku zonke, ezisukela ubhiya futhi kokuqeda, ezifana confectionery. Kodwa kukhona esinye isikhungo ehlanganisa imiqondo Patisserie, futhi ibha. Lena Max Brenner - Chocolate ibha eyaziwa brand Israeli.
Max Brenner ngokuqinile ubeka evulekile emhlabeni wonke, kuhlanganise amazwe afana no-USA, i-Australia, Singapore nasePhilippines. EYurophu, ushokoledi okwamanje. Russia yaba izwe lokuqala European ukuvula ibha ushokoledi Max Brenner. Nokho, namuhla sizoxoxa ngokuningiliziwe mayelana nempahla ensimini ka ezweni lethu. Ngaphezu kwalokho, sizokhuluma ukubuyekezwa nokunye okuningi, kodwa hhayi okungenani!
Naphezu kweqiniso lokuthi sha kuyinto odabuka Israyeli, ukuze zogwadule nazi futhi bekhathazekile ngokuthi eFrance, okuyinto i-khekhe kwakhe kokunethezeka ezaziwayo.
I-Max Brenner ukhetho olukhulu yasekuqaleni ushokoledi kophudingi (kukhona ngisho pizza amnandi) kusukela eliphezulu kakhulu imikhiqizo eluhlaza (ezikhethwe ngokucophelela cocoa kusuka abahlinzeki eqinisekisiwe).
Ingaphakathi yokudlela kuyinto nenhle kakhulu, kodwa imininingwane kumnandi, ezifana esetshenziswa isiphuzo ezithakazelisayo kitchenware uphawu yinqaba. Phezu kodonga elilotshwe ukuthi izincwadi ezinkulu anemibala, elifundeka kanje: "Chocolate kuwusizo kuwe." Ingaphakathi imibala 'emtoti' okuhambisana ngokugcwele umqondo lesikhungo. Lapha ushokoledi unikwa indima esemqoka, egcizelelwa njalo isici design.
Ngokwesibonelo, uphahla ibekwe ipayipi okudweba nombhalo othi "chocolate okumsulwa", ngaphansi kwazo, putatively, ukufuthelana ngu egeleza okusamanzi (lokhu Yiqiniso, into eqanjiwe, kodwa angisoze ngakukhohlwa). Alengiswe izibani ophahleni ngesimo amathonsi ensundu ne-bar senziwa ngesimo tile amnandi.
Yini e-kwasemini candy ibhizinisi?
Ibha yoshokholethi Max Brenner futhi ngokwalo sifana ibha ushokoledi. Kakade emnyango ungabona ukuthi kukhona isithako ezinkulu e zonke izitsha.
Chocolate ikhona yonke indawo - ngesimo imigoqo, amaswidi, amakhekhe, iziphuzo. Lena ipharadesi amnandi, okuyinto wayengafuni ukushiya kuze pereprobuesh zonke izinto imenyu.
Kukhona "chocolate esitolo" lapho ungakwazi ukuthenga noma yimuphi umkhiqizo kamnandi iphakheji enhle. Esitolo ungakhetha isipho dessert nganoma yisiphi isikhathi samaholide.
Muva nje awukwazi ngisho ukuluma kophudingi kanye izitsha ezivamile efana salads, amakhekhe sandwich.
Uma uvakashele Chocolate ibha Max Brenner e zeviki kusukela emini kuze ezine, uzonikwa isaphulelo 25%. Futhi uma ukwazi ikhodi izwi ( "Bill"), ungakwazi ukusizakala isaphulelo amaphesenti ayishumi, kungakhathaliseki ukuthi usuku kanye nesikhathi ukuvakashelwa.
Phakathi nezinsuku, ibha kuvula-8 ekuseni bese uyagijima kuze 23:00, uqala ngo-9 ekuseni ngezimpelasonto Max Brenner, futhi ivale at 23:00.
Usuku lonke ukudla kwasekuseni ku imenyu, futhi kusukela emini kuze zikuyise ezine ibhizinisi.
Ibha ushokoledi Max Brenner ukwamukela amakhadi asebhange babe vayfay. Ngeshwa, akukho yokupaka yangasese, futhi awukwazi oda ukulethwa kokudla futhi akukho amadili service - ngokufanele, akukho iIgama.
Lesi sikhungo okungavamile njengoba Max Brenner, itholakala kuleli kheli: Moscow, Umbala Blvd., inombolo yendlu 2, metro station "Pipe", BC "Legend of Tsvetnoy", esitezi sokuqala.
Esikhathini confectionery Max Brenner elihambisana imenyu: chocolate okuhlukile. Nakuba esanda kubha sikhishiwe ukukhanya isidlo izitsha kulabo abafuna ukuba kwasemini noma ibhulakufesi egcwele.
Lokhu ukusungulwa ku eziteshini of "Pipe" Okumangazayo e wawusondela amaswidi. Lapha, ngokwesibonelo, kukhona isikhathi esithile, futhi kukhona chocolate yokwelapha izikhathi. Strange yezokwelapha indaba ephathwayo ukwesekwa imijovo kanye izindlela ezimhlophe futhi elimnyama, elalihlala kungenziwa yayala kusuka kwimenyu. By endleleni, wonke kophudingi ngaphandle amaswidi, uzilungiselele ekhishini njengamagugu ambiwa phansi amsulwa ushokoledi confectionery impahla eluhlaza. Candy amazwe kusuka Israyeli kukhona kosher, kanye nezinye amaswidi.
I-Max Brenner imenyu ingase ikumangaze labo abazi ukuthi yini okufanele uyilindele kulokho kule ndawo. Phela, zonke dish uhlale ushokoledi samanje. Ingabe ngaphezu itiye wendabuko noma ikhofi. Nakuba kunezinhlobonhlobo yekhofi kanye ushokoledi.
By the way, iklayenti unikezwa ithuba iqhaza ekulungisweni izitsha zabo, isibonelo unqume ukuthi obungakanani ukubeka ganache waffles Belgian, noma wenze ukugcwaliswa yakho ukuze pancake, crepes.
imenyu Map Max Brenner nenhle sikubeke, senziwe ukukhanya ushokoledi amathoni. Kukhona ungakwazi oda isiphuzo esishisayo ne flavour ezahlukene ezifana cocoa ukuhweba "Kusukela Max" ukhokho nge lwebhece, ukhokho in Italian, nge caramel anosawoti. Lezi iziphuzo ayatholakala ngobukhulu amancane naphakathi, kanye nezindleko deda 280 noma bagcobe 360 (kuye ngokuthi ngosayizi batch). Imenyu has ushokoledi okunyakazisa, ngokuthi elixirs, ngakhonza lokunyenti, ngabe tinkomishi uphawu "Ellis Cup" futhi zibiza ruble 285-295. Ungakwazi oda amakhukhi shokoteyl azwakale kamtoti "Oreo" nebhotela lamantongomane, caramel anosawoti nabanye.
Zogwadule esigabeni "Chocolate legend" - pizza ne lwebhece okugazingiwe toffee usoso, fondant, imijovo, egcwele ushokoledi encibilikisiwe omhlophe noma amnyama. Kukhona nezinye amaswidi yasekuqaleni. The main isithako - high chocolate ukukhiqizwa siqu. Imenyu has a mncane French pancake, crepes ne toppings ongakhetha kuzo, waffles Belgian, ikhofi, itiye, u-ice cream ofakwe ezahlukene kanye fondues.
Ibha yoshokholethi Max Brenner phezu Boulevard anemibala - nansi best khekhe esitolo abathandi amnandi ukudla. Lapha ungakwazi oda fondue amnandi noma pizza amabili bese ubamba umhlangano ongavamile, futhi ongeza nomngane ukukhuluma phezu inkomishi cocoa izinongo liyakufanelekela.
On endaweni enjalo, njengomuntu ibha ushokoledi Max Brenner, ukubuyekezwa ukwazi ukuhlangabezana ezahlukene kakhulu: abathandi ushokoledi, yebo, ujabule, nalabo abangekho uthando abashisekayo ngakho-ke, namanje izohlala ukuhlatshwa umxhwele umoya jikelele ndawo amazing.
Ngokuvamile, izivakashi zibabaza eziningi kangaka amaswidi emhlabeni, kodwa kancane udumazeke uma they thola cishile ukuthi lutho luyaphi ngokusebenzisa amapayipi ekhethekile. Njengami, abaningi ugqozi ngawo kulesi sikhungo amancane: lokhu kusho ukuthi bonke abakhonza ukunambitheka esimnandi.
Omunye unomuzwa wokuthi isithako ebaluleke kakhulu izindawo quality enhle kakhulu (ezingavamile ukuthola into efana nale eMoscow). Lesi isitolo khekhe kungenzeka ukuchaza amazwi anjalo lapha: ushokoledi ushokoledi ushokoledi. Ngakho izitsha eziningi ezithakazelisayo futhi engavamile ungakwazi kuphela uzame lapha.
Lesakhiwo ziqasha ochwepheshe weqiniso, ukuze amakhasimende akwazi ukubona ukuthi bayakuthanda umsebenzi wabo futhi bafuna izivakashi wathi ababewajabulela bar. Kuyinto edabukisayo ukuthi akukho ukulethwa ukudla, kodwa ungakhetha isipho ushokoledi ongasipha othandekayo noma umngane, kulapho ukuthi choice ngempela nje omkhulu.
Bar-Boutique Max Brenner (eMoscow) - kule ndawo akuyona nje abathandi ushokoledi kodwa futhi kulabo ufuna izimangaliso ekuphileni kwansuku zonke. Ubani kalula sicabange ukuthi amapayipi omkhulu ogeleza ushokoledi, nendebe ukuthi uthi "Phuzani kimi," kubalulekile ukuba baphuze. Lena indawo izinyo elimnandi, futhi namaphupho, futhi kulabo nje badinga ukwelashwa amnandi emnandi.
Kube kufanele senze noma ubani ofuna ukuba abe nesikhathi esihle kule nkampani abangane noma abomndeni. Futhi usukulungele uvakashele yokudlela? Nokho-ke, kokuhlala ezimnandi, ajabule futhi imizwa ongenakulibaleka kusukela ukuvakashela le ibha!